Ukunxiba Akukho ziKhamera zeHlola yeHlola yeVidiyo yeLiso le-12MP, HD (SPY068) | Izisombululo ze-OMG
I-OMG ayinakunxitywa Hole yekhamera yokuHlola iividiyo zeglasi yamehlo- 12MP, 1080P HD (SPY068)
Ikhamera yokuqala yevidiyo yokuqala esemgangathweni ye-HD enxibe ngamehlo ngokufihla umsebenzi wediski
Imibala eqaqambileyo neyityebileyo yendalo, imifanekiso ephezulu yevidiyo.
Uyilo olujijithekayo lulungele ubuso obahlukileyo / ubuhlanga / ubudala.
Ifashoni kunye noyilo oluhle zihlala zisondelelene namanyathelo e-vogue.
Ukwamkelwa ngokugqibeleleyo kwengqondo yefashoni kunye nezinto, iiinguqulelo ezinomda ezifumanekayo zokuthambekela-kwebala.
Iikhamera ezi-5 ze-mega pixels kwi-CMOS yokurekhoda ividiyo ecacileyo yedijithali.
Indawo evulekileyo yasimahla ye-SD idibana neemfuno zabathengi ezahlukeneyo, inkxaso ye-MAX 32GB.
Unxibelelwano olulula ngePC / iiLaptops, akukho mqhubi ufunekayo.
Inkinobho yokusebenza yomntu onobungozi yokulawula lula.
Ukurekhoda ixesha lokwenyani, ungaze uvumele amaxesha angenakulibaleka abaleke ebomini.
Isixhobo kufuneka sisebenzise isixhobo sokubeka esweni, ukubona umntu ohamba ngeendlela, intatheli, amapolisa ezendlela, abahambi, abakhenkethi, abakhwela intaba, abafundi, abathanda ubomi kunye nokunye.
I vidiyo: AVI
Ulungiso lwevidiyo: I-HD epheleleyo ye-1920 x 1080 / 720p 1280 x 720
Imifanekiso: 2560 x 1920
Inkqubo exhaswe: Ndilungiselele iWindows / 2000 / XP / 2003 / Win7 / Vista, Mac OS
Inkxaso yokugcina: Ikhadi le-Micro SD elifikelela kuma-32gb (ALUFAKELwanga)
Uhlobo Lwebhetri: Umbane we-lithium ophezulu
13554 Ubutyebi Bonke Imibukiso ye-20 Namhlanje